पुरुषहरूको कस्ता कुराप्रति आकर्षित हुन्छन् महिला ? कस्ता पुरुषलाई रुचाउँदैनन ?
स्टिम न्युज वि.सं ४ जेष्ठ २०७६, शनिबार १३:०९
काठमाडौं : महिलाहरूमाथि गरिएको एक अध्ययनको निष्कर्ष छ-महिलाहरू पुरुषहरूको अनुहारलाई भन्दा व्यवहारलाई नोटिस गर्छन् । महिलाहरू कुन कुराले प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा धेरै पुरुषहरू जान्न चाहन्छन् ।
के कुरामा महिलालाइ आकर्षित गर्न सकिन्छ वा कस्ता पुरुषलाई रुचाउँदैनन । यि कुरा पुरूषको लागि पनि उत्तिकै चासोको बिषय हुन्छ ।
कसैलाई लाग्छ, महिलाहरू पैसा र प्रसिद्धिबाट प्रभावित हुन्छन् । कसैको विचारमा महिलाहरू पुरुषको अनुहार तथा फिटनेसलाई बढी महत्व दिन्छन् । यस्तो सोच छ भने त्यागौं है पुरुष मित्रहरू, अध्ययनले भन्छ-महिलाहरू पुरुषहरूको हाउभाउ, स्टाइल म्यानर्स एवं परिपक्वताबाट प्रभावित हुन्छन् ।
वास्तविकता के छ त कस्ता पुरुषलाई रुचाउँदैनन महिला ?
महिलाहरू पुरुषले आफ्नो साथी, परिवार एवं आफन्तजनसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा नोटिस गरिरहेका हुन्छन् । कुनै पुरुषले आफ्नो परिवार तथा साथीसँगी प्रति प्रेम, सद्भाव तथा आदर प्रदर्शित गरे भने उनीहरू प्रभावित हुन्छन् ।
परिपक्वतालाई महिलाहरू धेरै महत्व दिन्छन् किनभने उनीहरू पुरुषहरूको समझदारीप्रति आकर्षित हुन्छन् । महिलाहरू भावनात्मक रूपले कमजोर पुरुषलाई रुचाउँदैनन ।
सपनामा सम्भोग गरेको देखेमा के अर्थ लाग्छ ? थाहा पाउनुहोस खास कारण !
कस्ता पुरुषलाई रुचाउँदैनन
बुद्ध जयन्ती बिशेष: जान्ने पर्ने भगवान गौतम बुद्धको १० उपदेश